Qax iyo Barakac ka socda xaafad ka mid ah Muqdisho - Awdinle Online
Qax iyo Barakac ka socda xaafad ka mid ah Muqdisho
October 15, 2019 (AO) – Shabakadda Warbaahinta Awdinle Online ayaa baaritaan dheer iyo dabagal ku sameysay dhibaatooyin dhinaca amniga ah oo ay muddooyinkii la soo dhaafay wajahayeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho.
Arintan ayaa ku saabsan dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay xaafadda Kaawo Godey oo kala qeybisa degmooyinka Wadajir iyo Dharkenley ee gobolka Banaadir, kuwaas oo sababay barakac xooggan oo ka socda xaafadda, oo dadkii deganaa ay isaga guurayaan.
Awdinle Online ayaa ogaatay in tacadiyo badan ay ciidankaasi ka geysteen Kaawo Godey, kuwaas oo isugu jira dil, kufsi, dhac iyo dhibaatooyin kale.
Bushada qaar ka mid ah iyo dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in xaafaddu aysan laheyn wax saldhig ah, islamarkaana aysan ka howlgalin ciidan Boolis ah oo ka shaqeeya amniga.
Badankood Dadka aan la hadalnay ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka jooga halkan ay yihiin koox aan ka amar qaadan wax maamul dowladeed ah, kuwaas oo lacago baad ah ka qaada goobaha ganacsiga iyo haddii la dhisanayo xaafaddaasi.
Dadka shacabka ah waxa ay bilaabeen inay guryahooda ka barakacaan oo ijaar ka dagaan xaafadaha kale ee nabdoon.” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.
Previous articleDhagayso : PUNTLAND OO SHAACISAY MAGACYADA IYO TIRADA MARAAKIIBTA SHARCIDARA UGU KALUUMAYSTA XEEBA hooda
Next articleAhmed madoobe iyo madaxda ku sugan kismaayo oo booqday dekeda iyo wazaaradaha jubaland